XOG: Farmaajo & Kheyre oo xilka ka qaadaya Madaxweyne Shariif Xasan – XAMAR POST
XOG: Farmaajo & Kheyre oo xilka ka qaadaya Madaxweyne Shariif Xasan
Xog ay heshay Warbaahinta Xamarpost.com ayaa sheegeysa in magaalada Muqdisho uu ka socdo Olole xilka looga qaadayo Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Ololahan waxaa hormuud ka ah madaxda dalka, balse waxay u adeegsanayaan masuuliyiin ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed iyo Baarlamaanka Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho waxaa kulan ku yeeshay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa laga soo doorto deegaanada Koonfur Galbeed iyo Xildhibaanada maamulkaasi, waxayna hoos ka xariiqeen in xilka laga tuuro Madaxweyne Shariif Xasan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa doonaya sidii ay xilka kaga tuureen Madaxweynihii Hirshabeelle Cosoble, inay si la mid ah oo siyaasadeed ku ridaan Shariif Xasan oo ka soo horjeestay Go’aankii dhex dhexaadnimada ahaa ee dowlada Federaalka ay ka qaadatay Xiisada Khaliijka.
Dowlada Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa lacago aad u badan u balanqaaday Madaxweyne Shariif, waxaana la siin doonaa Mashruucyo ka madax banana dowlada dhexe, wuxuuna arintaasi u arkaa fursad qaali ah, laakiin waxay ku abuurtay xiisad siyaasadeed.
Xamarpost ayaa ogaatay in Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cismaan Jawaari uu kulan la qaatay Farmaajo iyo Kheyre wuxuu soo dhaweeyay in siyaasiyiinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed ay xilka ka tuuraan Shariif oo isaga waligiisba uu khilaaf kala dhaxeeyay, wuxuuna balanqaaday inuu shaqeyn doono sidii qorshahan uu ku guuleysan lahaa.
Maxaa looga hadlayaa kulanka xildhibaanada BF ee maanta ?
XOG: Xubno iska casili doona Guddiga baaraya arinta Qalbi dhagax